တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ ... အပိုင်း (၂)
Posted by မေဓာဝီ at 4:14 AM
ဖတ်ရတာ အဖိုးတန်ပါတယ် အမရေ.. ကဗျာအကြောင်းအပြင် အက္ခရာပြောင်းလဲပုံကိုပါ ရှင်းပြထားတာကိုလဲ ကျေးဇူးပါ.. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်…နောက်ရေးလာမယ့် ပေးစာတွေမှာလဲ ကဗျာအကြောင်းတွေနဲ့အတူ မြန်မာရှေးကဗျာတွေ ဖတ်ရနိုင်လိမ့်အုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စကားလုံးကို အထိမိဆုံးနဲ့ အကျစ်လစ်ဆုံး တင်ပြနိုင်တဲ့ မြန်မာကဗျာတွေရဲ့ အကြောင်းကို စောင့်ဖတ်ပါအုံးမယ်။
good article,pls carry on, ma may dar we,
in poetry, techniques or contents or message or ideology or classic or modernism or post modernism or images or
futurist or symbolic or blank verses or postmodernism or ----. whatsoever, poetry itself is the by far the most biggest subject,
please carry on," everything is poetry"
နဘေတွေ လေးချိူး ဒွေးချိူး တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
နောက်ထပ်ရှိရင် ထပ်တင်ပေးပါဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖိုရမ်တစ်ခုခုမှာဘဲ အချိန်အားရင်ရေးပေးပါလား။ ဟီ ဟီး။ အားမနာလျှာမကျိူးလို့တော့ မပြောနဲ့နော်။ ဖတ်ချင်လို့ပါ။
Hi sis, won't mind if I add you in my blogroll right? :P I've already done that!!
ထပ်ရေးပေးပါဦး၊ ဗဟုသုတရပါတယ်၊ မမေရေ အရင်ကော်မက်တွေပြန်ရှာဖတ်နော်၊ ညလေး ရီစရာတွေရေးပေးထားတယ်
1/24/2007 12:26 PM
အချိန်ရရင် ရသလို ရေးပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။
ဖိုရမ်မှာတော့ မတင်ချင်တော့ဘူး ကိုစိန်မျောက်မျောက်ရေ .. ဒါကြောင့် ကျမ ဘလော့မှာသာ စောင့်ဖတ်ပါတော့။
ညလေးလည်း မမေရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေအားလုံး ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညလေးရဲ့ ကွန်မန့်အားလုံးဖတ်ရပါတယ်။
မနေ့က တနေကုန်မီးပျက်နေတဲ့အတွက် ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်ပါ၊ ဒီနေ့ အဆင်ပြေရင်တော့ တင်ပါမယ်။ လာရောက် အားပေး ဖတ်ရှုကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘလော့ခ်တွေလည်မဖတ်ဖြစ်တာကြာလို့ ခုမှပဲဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိတော့တယ်ဗျာ... ကျနော့ အဖို့တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခွာနေရတဲ့ အချစ်ဆုံးသူကိုပြန်တွေ့ရသလိုမျိုး ၀မ်းသာရတယ်ဗျာ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ရှေးမြန်မာကဗျာတွေကို အသဲစွဲဗျ... ခေတ်နောက်ပြန်တယ်ပဲပြောပြော Old fashion လို့ပဲဆိုဆို ကဗျာဆိုကာရန်ပါမှ ကြိုက်တယ်.. ကာရန်မဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ရတာ ဆားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့... ကျနော်ရှစ်တန်း ကျောင်းသားဘ၀မှာ ဖေဖေ့စာအုပ်ဗီဒိုကို မွှေရင်းနဲ့ ကဗျာဖွဲ့နည်း စာအုပ်ကိုတွေ့ရာကနေ အမြစ်တွယ်လာခဲ့တာဗျ... အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ ဒွေးချိုး၊လေးချိုး နဲ့ တေးထပ် တွေကို ရေးတတ်နေပြီလေ... အများဆုံးလက်ရည်သွေးရတာကတော့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ရည်းစားစာတွေမှာပေါ့..ဟိဟိ.. ကောင်မလေးတွေကလည်း မြန်မာဖတ်စာမှာ ကဗျာတွေ သင်နေရတော့ ကျနော့ရေးဟန်တွေကိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုပဲ... အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကတော့ လဘက်ရည်ဖိုး ဆိုတာ ကျနော့အိပ်ကပ်ထဲက ထုတ်ရတယ်ကိုမရှိခဲ့ဘူး...ဟဲဟဲ..စာမူခအဖြစ်တိုက်ကြတာလေ... အဲ့ဒီနေ့တွေကိုပြန် စဉ်းစားရင်ပျော်စရာကြီး... ခုတော့လဲ မှတ်ဥာဏ်ခွန်အားဆင်းရဲမှုကြောင့် ဘာတခုမှ အစ အဆုံးမှတ်မိတော့ဘူး... ဟိုတစ ဒီတစတောင် ရေးရေးပဲရှိတော့တယ်... ခုလေ... နူးညံ့တဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်း အဲ့ဒီကဗျာပိုးကထလာတယ်.. ဒါပေမဲ့ မရေးဖြစ်တာအတော် ကြာတော့ စပ်နည်းမူဟန်တွေက ဝေေ၀၀ါးဝါးဖြစ်နေတယ်... လင်္ကာစပ်နည်းတခုပဲ အတိအကျမှတ်မိတယ် ဒွေးချိုး၊ လေးချိုး နဲ့ တေးထပ်တွေကို ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ ဘူး... ဦးပုညက” စပ်မူနည်းသိလိုပါလျှင်၊ တေးကိုသာရအောင်ကျက်ပါတော့၊ ခက်လှဘူး မျိုးသိင်္ဂါ၊ စိုးရိမ်နဲ့ဗျာ” လို့ရေးခဲ့သလိုပဲ နမူနာ ကဗျာတွေရှိရင် စပ်နည်းက ပြန်ရှာလို့ ရပါပြီ.. ဒါကြောင့်မို့ မမဆီမှာ ဒွေးချိုး၊လေးချိုးနဲ့တေးထပ်ကဗျာတွေကို ရိုက်ပြီးသားစာဖိုင်ရှိရင် မောင်လေးဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးပါလို့ အကူညီတောင်းပါရစေဗျာ... ဦးပုည၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေ၊ ဦးကြင်ဥ၊ ဦးကြော့၊ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင် ဘယ်သူ့ကဗျာတွေပဲ ရရ ကျနော်လိုချင်ပါတယ်... ဘ၀ဇတ်ဆရာအလိုကျ တိုင်းတပါးမှာအခြေချနေရတော့ ကျနော်မြတ်နိုးတဲ့ စာပေ တွေကို အလွယ်တကူရှာယူလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ... အခု မမရဲ့ဒီပို့စ်မျိုးကိုဖတ်ရတာ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်... ကျနော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့အချို့ကဗျာ လေးတွေတော့ မှတ်မိသေးတယ်... ဒါပေမဲ့ စိတ်တိုင်းမကျလို့ရှေးကဗျာမူရင်းတွေကပဲ နည်းပြန်ရှာချင်လို့ပါ... ကျနော်ပထမနှစ်တက်တုန်းက နောက်ကျမှရောက်လာတော့ အဆောင်မှာ သူများမနေချင်တဲ့အခန်းမှာနေခဲ့ရဖူးးတယ်...အခန်းက အလင်းရောင် အားနဲတဲ့အပြင် ရေးချိုးခန်း၊ အိမ်သာနဲ့ကလည်းကပ်နေတယ်... အဆောင်သူ မယ်မင်းကြီးမတွေကလည်း တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်ဝတ်ပြီး လျှော်လိုက်ရတဲ့ အ၀တ်ကလဲ သူတို့ဟာချည့်ပဲ... နောက်ဆုံးကျနော့အခန်းဝအထိ သူတို့အ၀တ်ကြိုးတန်းတွေက နယ်ချဲ့လာတော့ ကျနော့မှာအခန်းကထွက်တာနဲ့ သူတို့အ၀တ်တွေအောက်က ငုံ့ရှောင်ထွက်ရတယ်... အခန်းနောက်က မိလ္လာတွင်းအဖုံးကလဲပေါက်နေတော့ သူတို့အပေါ်ထပ်က ရေလောင်းချတာနဲ့ အော်ဂလီဆန်စရာအနံ့ကြီးက ကျနော့အခန်းထဲ ၀င်လာပါရော... နောက်ဆုံးမခံနိုင်တာနဲ့ကဗျာတပုဒ်ရေးပြီးအဆောင်ဝမှာ ကပ်လိုက်တယ်... အဆောင်ပိုင်ရှင်ဈေးကပြန်လာတော့ကျနော့်ကဗျာတွေ့သွားပြီး ချက်ချင်းပဲ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးလို့ကျနော့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ်... ကျနော့ကိုလဲ ”ငါ့သားရယ် မင်းလိုအပ်တာရှိရင် အန်တီကိုတိုက်ရိုက်ပြောပါကွယ်.. ဒီလိုမျိုးစာတော့ရေးမကပ်ပါနဲ့နော်... အန်တီ့အဆောင်နာမ်မည်ပျက်မှာစိုးလို့ပါ” လို့အဆောင်မှူးကိုယ်တိုင်ကတောင်းပန်ရတဲ့ကဗျာလေးမို့ခုထိမှတ်မိနေသေးတယ်..ဟိဟိ..
ပတ်ခွေလည် ထမိန်တန်း။ ။
ရေဆွတ်လို့ under wear ရယ်
ရံကာခါ ဆင့်ခြုံလို့လွှမ်း။ ။
ဗလာချီ ဗြောင်လှန်း။ ။
ရှောင်ရမ်းလို့ ထွက်လာနိုင်။ ။
နေမရအောင် ချီးအနံ့ကလှိုင်။ ။
ခွေယိုင်ကာ နုံးရှာပေါ့လေး။ ။
ခုကဗျာလေးကတော့ ကျနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့စဉ်တုန်းက7July အထိမ်းအမှတ်စာပေပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပေါ့....
ရက်ဖွေရှာ ပြန်ကြည့်။ ။
သူနိုင်ညစ်တာ လူတိုင်းအသိ။ ။
သမဂ္ဂ ဖြိုတဲ့အထိ။ ။
ရက်စက်သည့် ယုတ်မာပုံ။ ။
ထုတ်ဖော်ကာ ပြောလို့မကုန်။ ။
ဒေါင်းခွပ်သံ ညီကြစို့လေး။ ။
မမရေ... ၀ါသနာပါတာတွေ လျှောက်ပြောနေတာနဲ့ စာအတော်ရှည်သွားပြီ... တကယ်ဆို အီးမေးလ်နဲ့ ရေးပြီးအကူညီတောင်းချင်တာပါ... မမလိပ်စာမသိလို့ဒီမှာပဲရေးလိုက်တာ... မမဖတ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပေါ့နော်... ကျနော့ကြောင့် မမဘလော့ခ်နေရာပုပ်မှာစိုးလို့ပါ....
1/29/2007 3:29 AM
အရင်ကတော့ ကိုဟယ်ရီရဲ့ မြန်မာကဗျာဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားဆိုတာတွေကိုပဲ ဖတ်ဖြစ်တာ။ ခုတော့ ဖတ်စရာတစ်ခုတိုးပြန်ပြီဗျို့..။ကျေးဇူးပါအစ်မရေ
8/23/2012 6:12 AM